ပညတ်တရားတော်သဘောတူညီခကျြကဘာလဲ? | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ ပညတ်တရားတော်သဘောတူညီခကျြကဘာလဲ?
အဆိုပါ 2003 အတွက်အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုအက်ဥပဒေနှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စကော့တလန်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများအက်ဥပဒေတွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
ထိုဥပဒေ, ရှိသမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုပါဝင်သည်ကြောင့် "လူတစ်ဦးကသူ၏လိင်တံနှင့်အတူလိင်အင်္ဂါကိုထိုးဖောက်ဖို့ (က), [ဒါပေမယ့်လည်းယခု] အခြားလူတစ်ဦး (ခ) ကိုစအိုသို့မဟုတ်ပါးစပ်ဘို့တစ်ခုပြစ်မှုစေရန်အဓမ္မပြုကျင့်မှု၏အစဉ်အလာနှင့်အဓိပ္ပါယ်တိုးချဲ့ထားပါတယ် တစ်ခုခုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်ဆငျမခွ, ထိုလူတစ်ဦး၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲနှင့် B ကသဘောတူညီချက်မဆိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲ။ "
အဆိုပါစကော့တလန်ဥပဒေပြဌာန်းလက်အောက်တွင်, "ခွင့်ပြုချက်အခမဲ့သဘောတူညီချက်ဆိုလိုသည်။ "
“ ၅၉ ။ ပုဒ်မခွဲ (၂) (က) သည်အရက်သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကြောင့်၎င်းကိုသဘောတူရန်တိုင်ကြားသူအားမစွမ်းနိုင်သည့်အချိန်တွင်အမူအကျင့်ဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာတွင်လွတ်လပ်သောသဘောတူညီမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤပုဒ်မခွဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လူတစ် ဦး သည်မည်သည့်အရက်ကိုမဆိုသောက်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲပြီးနောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသဘောတူခွင့်မပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်အရက် (သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးခြင်း) ကိုသောက်သုံးခဲ့ဖူးပြီး၊ သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲအတော်လေးအရက်မူးနေနိုင်သည်။ သို့သော်သူသို့မဟုတ်သူမအလွန်မူးယစ်ဆေးစွဲနေသည့်အချိန်၌လိင်မှုကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိမရှိကိုရွေးချယ်ရန်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးသွားသည့်တိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသည်တိုင်ကြားသူ၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲပြုလုပ်သည်။
အရပ်ဘက်ဥပဒေတွင်ဥပမာအားဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသောအခါသဘောတူခွင့်ပြုချက်ဆိုသည်မှာတူညီသောသဘောတူစာချုပ်ကိုဆိုလိုသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွင်၎င်းသည်ခွင့်ပြုချက်နှင့် ပို၍ နီးစပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပဒေရေးရာကဏ္နှစ်ခုစလုံးသည်၎င်းတို့တွင်အာဏာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအယူအဆများပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသည်။ 'သဘောတူခွင့်ပြုခြင်း' ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုဥပဒေ၏အရှုပ်ထွေးဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်သုံးခုရှိသည်။
ပထမဦးစွာပြုလုပ်အခြားသူတစ်ဦး၏စိတ်တွင်ပေါ်မယ့်အရာကိုသိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ယခုအခါသို့မဟုတ်ပဲနောက်ပိုင်းအချိန်တွင်လိင်ဆက်ဆံမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူချိန်းတွေ့စတင်ရန်ဖိတ်ခေါ် ok သော signal ကိုပရောပရည်သလဲ? ယောက်ျားလိင်သူတို့နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အမြိုးသမီးမြား '' အားပေးအားမြှောက် ', မိန်းမများထက်ပိုလကျအောကျခံဖြစ်နှင့်လိုက်နာရန်အတွက်ပိုပြီးကြီးစိုးဖြစ်ဘို့ကလူမှုရေးစံတစ်ခုဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ပညာရှိသ? အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဆက်ဆက်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ဤအမြင်ကိုအားပေးအားမြှောက်။
ဒုတိယအချက်မှာလိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များကိုမျက်မြင်သက်သေမရှိဘဲသီးသန့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည် ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုရှိပါကဂျူရီလူကြီးတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး ၏ဇာတ်လမ်းကိုအခြားတစ် ဦး ထက် ပို၍ ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ပါတီများ၏စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အရာအဖြစ်အပျက်အထိ ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အထောက်အထားများမှကောက်ယူရလေ့ရှိသည်။ ပါတီတခုခုမှာ (သို့) အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာသူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့ကြတာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ်ယခင်ဆက်ဆံရေးမျိုးဘယ်လိုရှိခဲ့သလဲ။ အကယ်၍ ဆက်သွယ်မှုကိုအင်တာနက်ပေါ်မှသာပြုလုပ်ခဲ့လျှင်သက်သေပြရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးကနေရလဒ်နိုငျသောဒုက္ခခံရသော, တတိယ, မကြာမီလုပ်အချက်အလက်များနှင့်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်များများ၏တိုင်ကြားရဲ့စာမျက်နှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ဒါဟာခက်ခဲအခြားသူများကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ကိုသိရန်အဘို့အစေနိုင်သည်။ အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးခဲ့ကြသည့်အခါအဆိုပါအခွအေနအားလုံးပိုမိုစိန်ခေါ်မှုကိုဖန်ဆင်းသည်။
ဤ လင့်ခ် PSHE အသင်းအနေဖြင့် Crown Prosecution Service မှအကြံဥာဏ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ကောင်းများပေးသည်။
ဘီဘီစီကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရေဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၂ ကားကိုလည်းခေါ်ဆိုခဲ့တယ် သဘောတူညီချက်၏ခေတ်သစ် ယနေ့လူငယ်များသည်လက်တွေ့တွင်သဘောတူခွင့်ပြုချက် (သို့) ကင်းမဲ့ခြင်းကိုမည်သို့တွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ကိုဖော်ပြသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုမှာ ဦး နှောက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းသည်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စွန့်စားမှုနှင့်စမ်းသပ်မှုများသို့ ဦး တည်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်၏ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအပိုင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်အပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများရောနှောနေသောအခါဤသည်ပို။ ပင်ခက်ခဲစေသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့်နေရာများတွင်လူငယ်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို 'တက်ကြွသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်' ကိုရှာဖွေသင့်သည်။ ကလေးများကိုဤသင်ကြားရန်၊ လက်ရေးရုပ်ပုံကြီး လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုခွင့်ပြုချက်နှင့်ပတ်သက်။ ဒါဟာအရမ်းလိမ္မာပါးနပ်သည်နှင့်အမှတ်ဖြတ်ပြီးကူညီပေးသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသဘောတူခွင့်ပြုချက်သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး မှတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲလူတစ် ဦး ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အခြေအနေတစ်ခု၏ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်အခြေအနေများ (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်လူတစ် ဦး ၏တိတ်ဆိတ်မှုသို့မဟုတ်မလှုပ်မရှားမှုကြောင့်) မှပေါ်လွင်သည်။ ယခင်ကလက်ထပ်ခဲ့သောစုံတွဲတစ်တွဲသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိင်ဆက်ဆံရန်“ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောသဘောတူခွင့်ပြုချက်” ကိုယူထားသည်။ ယခုအယူဝါဒကိုနိုင်ငံအများစုတွင်အသုံးမ ၀ င်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သော်အချို့သောအမျိုးသားများသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ ဒီပုံပြင် သြစတြေးလျကနေ။
<< သဘောတူညီချက်ခေတ် အလေ့အကျင့်အတွက်သဘောတူညီချက်ကဘာလဲ? >>